Ra’iisul wasaare Kheyre oo kullan la yeeshay wakiilo ka socdo beesha caalamka (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo kullan la yeeshay wakiilo ka socdo beesha caalamka (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kullan gaar ah la yeeshay wakiilo ka socdo beesha caalamka, wuxuuna kullankaasi uljeedkiisu ahaa inuu warbixin ka siiyo xaaladda dalka, islamarkaana uu ka codsaday in labada dhinacba ay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah oo dhameystiran.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka in mudadii ay jirtay dowladda Soomaaliya ay ku talaabsatay inay horumar ka gaarto dhinaca gurmadka abaaraha, amniga, dhaqaalaha, la dagaalanka musuq-maasuqa iyo qorsheyaasha guud ee xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka in dhinacooda wax muuqda u qabtaan dalka Soomaaliya sida mashaariicda dhismaha wadooyinka, buundooyinka, dhismaha hay’adaha dowliga ah iyo mashaariicda wax soo saarka oo keeni kara inay shaqo u abuuraan dhalinyarradda Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sidoo kale si weyn u dhaliilay qaabka ay beesha caalamka ula macaamisho Soomaaliya oo balaayiin doollar ay sheegeen inay ku bixiyaan Soomaaliya, iyadoo aanay jirin wax muuqda oo ay ku qabteen, balse ka dhigtay inay diyaarado ku raacaan.
Kullankaasi ayaa waxaa goob joog ka ahaa ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee QM, ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika, safiirada Midowga Yurub, UAE, Turkey, Sweden, China, waxaana qadka shaashada sidoo kale ku jiray wakiilo ka socday Mareykanka iyo UK.
Sidoo kale, dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxaa goobjoog uga ahaa ra’iisul wasaaraha, wasiiradaha kala ahh maaliyadda, qorsheynta, difaaca, warfaafinta iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sidoo kale u sheegay wakiiladda beesha caalamka in dhaqankii hore uusan soconeeynin islamarkaana loo baahan yahay in ballan-qaadyadii ay beesha caalamka u sameyeen Soomaaliya, si dhab ah loo fulliyo.
Dhinaca kale, mas’uuliyiintii ka socotay beesha caalamka ayaa dhankooda ugu mahad-celiyey ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre qaban-qaabada kullanka iyo warbixinta saafiga ah ee uu ka siiyay xaaladda dalku maraayo, waxayna dhammaantood qireen in horumar baaxad leh oo waxqabad dhab ah lala yimid, iyagana ay diyaar u yihiin inay caawiyaan dowladda federaalka Soomaaliya.